Zvepabonde Kuwedzera Hormones powder series makashambadzi - AASraw powder
/ Products / Bonde Kuwedzera Mahormone
Kuita zvepabonde kuwedzera mahomoni kunosanganisira zviwanikwa zvekusika uye makemikari makemikari. Muchikwata chedu, tinongotanga zvimwe zvinyorwa zvezvinhu zvinowanzoonekwa zviri mumusika.
Masero echikadzi eestrogen, progesterone, uye testosterone zvinowira pasi nezera, kunyanya panguva uye mushure mekuguma kwemwedzi. Tsvaga nzira dzekuchengetedza yako bonde kutyaira kumusoro, kunyangwe mahormone ako ari pasi. Uye, kune vamwe varume, pamwe nezera rinomuka, iro bonde dhiraivha rinodzikira. Uye, kunyanya, vamwe varume vane dambudziko rekushomeka kwe erectile. Kuti ushandise iyo chaiyo bonde inosimudzira mishonga, vabatsire kunakidzwa nehupenyu, kana hupenyu hwepabonde huri nani.
Erectile dysfunction (impotence) kusakwanisa kuwana nekuchengetedza erection yakasimba zvakakwana zvepabonde.
Kuva nedambudziko rekumisikidza nguva nenguva hazvireve kuti chikonzero chekunetseka. Kana erectile kudzvinyirira iri nyaya iri kuenderera, zvisinei, inogona kukonzera kushushikana, kukanganisa kuzvivimba kwako uye kubatsira kumatambudziko ehukama. Matambudziko ekuwana kana kuchengeta erection inogona zvakare kuve chiratidzo cheyakavanzika hutano mamiriro ayo anoda kurapwa uye nenjodzi chikonzero chehosha yemoyo.
Kurapa kunoenderana nechinokonzera.
Kurovedza muviri, kunyanya aerobic miitiro mukati mehupenyu hunobudirira mukudzivirira ED; kurovedza muviri sekurapa iri pasi pekuongorora. Nokuti fodya inoputa, kupera kunoguma mukuvandudza kukuru.
Mushonga wemapurmotherapy uye mishonga yekudzivirira mishonga inotanga kurapa, inoteverwa nemajojo emishonga muchirume, uye penile implants.
Iyo PDE5 inhibitors sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) uye tadalafil (Cialis) mishonga yemishonga inotorwa nemuromo.
Aroseti inobatanidza alprostadil neyemhepo yakagadziriswa DDAIP yakagamuchirwa muCanada senzira yekutanga yekurapa kwekusavhiringidza kwe erectile.
Imwe yemishonga inotevera inogona kuiswa mupenisi: papaverine, phentolamine, uye prostaglandin E1.
Sildenafil / Sildenafil Citrate (viagra) inowanzobatwa neEED. Zvinokubatsira kuti uome zvakaoma kana nguva yakarurama. Iwe haufaniri kuenda kubva ku6 kusvika pakati peusiku chete nekuitora.
Tadalafil / Cialis inobatsira zvikuru yekurapa zvepabonde nekukurumidzira kushanda, kuderera kuwedzerwa, kunogara nguva yakareba.
Kunze kweivo, Dapoxetine HCL inotendwa kubatsira murume kuti apedze nguva yakareba munguva yekugona zvepabonde, kana kusanganiswa kushandiswa nekanyorwa kana cheagra.
Mushure mokutora bheti rimwe chete, zvimwe zvekushanda kweCIALIS zvinoramba zviri mumuviri wako kwemazuva anopfuura 2. Izvo zvinoshanda zvinogona kuramba zvakasara kana une matambudziko neinso dzako kana chiropa, kana uri kutora mamwe mishonga.
Pane Mishonga Inogona Kuchinja CIALIS?
Udza mutapi wako wehutano nezvemishonga yaunotora, kunyanya:
mishonga inonzi "nitrate" iyo inowanzo gadzirirwa kurwadziwa kwepfupa
mishonga inonzi guanylate cyclase stimulators inoshandiswa kurapa pulmonary arterial hypertension uye chronic-thromboembolic hypertension
alpha-blockers inowanzogadzirirwa zvinetso zveprostate
kurwara kweropa mishonga
mishonga yeHIV kana mamwe marudzi emuromo antifungal mishonga
mamwe marudzi emishonga inorwisa mabhakitiriya yakadai sa clarithromycin, telithromycin, erythromycin (mazita emagetsi akawanda ariko, tapota taura nemupi wako wehutano wehutano kuti aone kana uri kutora mushonga uyu)
mimwe mishonga kana kurapwa kwe erectile dysfunction (ED)
CIALIS inotengeswawo seAdCIRCA mukurapa kwepermonary arterial hypertension. Usatora zvose CIALIS uye ADCIRCA. Usatora sildenafil citrate naCIALIS.
Achiratidza zvose 11 zvawanikwa
Ratidzai 32 Products
Ratidzai 48 Products